umatshini wokugaya irayisi,Umatshini wokugraya irayisi uya kuthengiswa
1.Ilayisi yokusila kunye nomatshini wokusila wekhaya kunye nelali, iindawo ezisemaphandleni nasezintabeni.
2.Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi, inkqubo emfutshane yemveliso,irayisi encinci eseleyo. I-Mill paddy kwilayisi kunye ne-bran ngokwahlukeneyo. Kananjalo umatshini wokusila unokusila umbona,irayisi ibe ngumgubo.
3.Ubungakanani obukhulu,ubunzima bokukhanya,Kulula ukusebenza ngomgangatho owomeleleyo, Ixabiso lokukhuphisana kunye nenqaku elikhethekileyo.
Iinkcukacha Product Rice lokusila kunye grinder umatshini edityanisiweyo
Ilayisi yerayisi kunye nomatshini wokugaya ,Umatshini omnye onemisebenzi emibini.
1.Umatshini welayisi osetyenziselwa irayisi ikakhulu usetyenziselwa irayisi yokucheba i-paddy kwi-rayisi emhlophe kusapho, ifama, Indawo yokulungisa iinkozo njl. Izinga lokuxobha ngaphezulu kwe 95%.
2.Umatshini wokugaya sisixhobo kwinto esebenzayo, Ukudibana kwezinto kunye nezinto ezisetyenziselwa ukuba ngumgubo, Umgubo ikhutshwe ngesihlungulo ukwenza umgubo nkqu ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzisi.Ukugaya uthotho lwezixhobo ezizodwa:irayisi,ingqolowa,ingqolowa irayisi, ulusu olujijekileyo, ipelepele, iziqholo, njl.
Iimpawu zomatshini weerayisi kunye nomatshini we-grinder
1.Ilayisi lokusila kunye nomatshini wokugaya ungasetyenziselwa iinjongo ezininzi,Inokusetyenziselwa ukugqobhoza iinkozo okanye ukusila kwengqolowa okungahlangabezana neemfuno ezisisiseko zosapho.
2.Iqhutywa ngemoto enye 2 izixhobo zokugcina iindleko,Ukucwangciswa kwamandla kulungele, Umatshini weerayisi kunye nomatshini wokugaya unakho ukuqhutywa ngumbane, ikwaqhutywa yinjini yepetroli,injini yedizili.
3.Umatshini wokugaya irayisi ungadibanisa ubungakanani obahlukeneyo besisefo selayisi (ukhetho 0.7mm, 1.0mm, 1.3mm), Ke oko kunako ukucubungula izixhobo ezahlukeneyo;Ubungakanani besikrini sokukhetha kumatshini weerayisi wokuguba ngu-0.2-0.6mm.ubungakanani obugqityiweyo obunokukhethwa ngumthengi.
4.Makwenziwe ngesixhobo sokuguqula ibhanti yokuhambisa ngokuzenzekelayo, isixhobo sokutshintsha sinokulungelelanisa umatshini weerayisi kunye nomatshini wokugaya usebenze ,inokuqinisekisa ukuba i-grinder ayisebenzi xa kusetyenzwa umgayo welayisi. okanye xa usila izixhobo ,ingqayi yerayisi ayizukusebenza.
5.Umatshini wokugaya irayisi kunye nomatshini wegrinder onesayizi esincinci, kulula ukuthutha nokuhamba, isitya somgubo welayisi kunye nesixhobo sokuhlengahlengiswa kwemitha, Sebenzisa itekhnoloji yangaphambili ukufezekisa ukubonakala okuhle, iyasebenza, iziphumo zococeko,ukunganxibi.
6.Isihlalo somatshini we-Grinder ixhotywe ngephedi ukuthintela ukuphuma kothuli, kunye nengxowa yelaphu ibonelelwe ukuthintela uthuli kunye nokuqokelela komgubo.
Technical iparameters yokugaya irayisi kunye nomatshini wokugaya
Ilayisi yelayisi 150 ~ 200
Grinder 150 ~ 200
(r / imiz)
Ixabiso elipheleleyo leRice
ividiyo yomdibaniso weerayisi odibeneyo kunye nomatshini wokugaya
Qhagamshelana nathi ngokuba Rice lokusila kunye grinder umatshini edityanisiweyo